ဝီလျံဟာအောင်နိုင်သူကဘယ်သူလဲ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဝီလျံဟာအောင်နိုင်သူအင်္ဂလန်၏ပထမဦးဆုံး-Norman စိုးစံလေ၏။ ကြောင်းမီ, သူပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနော်မန်၏ Duke, မြေသြဇာအာဏာအရှိဆုံးသည်အရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝီလျံ 1050 အတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံသွားရောက်ခဲ့သည့်အခါကျွန်မသူ့ကိုသူ၏ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ Edward ဟာ Confessor, အင်္ဂလန်ရှင်ဘုရင်အင်္ဂလန်၏ရာဇပလ္လင်ကတိပြုခဲ့သည်။ အက်ဒွပ် 1066, Harold, ဥပဒေထဲမှာအက်ဒွပ်ရဲ့အစ်ကိုအတွက် chidless အနိစ္စရောက်သောအခါသို့သော်ဝီလျံညျရှငျဘုရငျဖွစျဖို့အကူအညီပေးခဲ့ပေမယ့်သူ့ကိုယ်သူအင်္ဂလန်ဘုရင်သရဖူဆောင်းခဲ့ဘူး။ ဝီလျံလျင်မြန်စွာမိမိအဘို့ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုသိမ်းယူဖို့အင်္ဂလန်ကျူးကျော်၏။ ဝီလျံအလျင်အမြန်၏တိုက်ပွဲမှာ Harold -Anglo-Saxon စစ်တပ်ကလုပ်ကြံ။ 1069 Norman အင်္ဂလန်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုသိမ်းပိုက်, နဲ့ William အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ စီမံခန့်ခွဲအင်္ဂလန်နှစ်ပေါင်းများစွာဝီလျံ descendont ။
Vilga # 769; LM ငါ Zavoeva # 769; လျ (Wilhelm Norman သို့မဟုတ် Wilhelm Nezakonnorozhdnny ;. Engl ဝီလျံငါအောင်နိုင်သူဝီလျံဟာ Bastard, fr Guillaume le Conqu # 233 ;. Rant, Guillaume le B ကို # 226; tard; 1027 / 10289စက်တင်ဘာလ 1087 နော်မန်၏) Duke (Wilhelm II ကို; 1035 နှစ်) နှင့် 1066 နှစ်ပေါင်းအတူအင်္ဂလန်၏ရှင်ဘုရင် (), အင်္ဂလန်၏-Norman သိမျးပိုကျ၏စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့်ခေါင်းဆောင်အကြီးဆုံးဥရောပ၌ XI ရာစုနိုင်ငံရေးသမားတွေတဦး။
ဝီလျံငါအောင်နိုင်သူ (# 233 ကြိမ်မြောက်ဝီလျံ; အောင်နိုင်သူ) (1027 သို့မဟုတ် 1028, Falaise, ပြင်သစ်, 9.9.1087, Rouen), နော်မန်၏ Duke (1035) အင်္ဂလန်၏, မင်းကြီးသည် (106687) ။ နော်မန်အတွက် ducal ပါဝါအာူးသူ tyazhelovooruzh တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားတပ်မတော်ကိုဖန်တီးရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ Kopp နိုက်နှင့်ခြေလျင် (ခန့်။ 10 တထောင်။ pers ။ ) ။ ဤအတပ်ဖွဲ့တွေ 28 စက်တင်ဘာလအတူ။ 1066 တောင်ပိုင်းအပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်နှင့် 14 အောက်တိုဘာလကမ်းခြေ။ အလျင်အမြန်၏တိုက်ပွဲမှာဘုရင်က Harold ၏ Anglo-Saxon တပ်မတော်ကိုဖဲ့ဖို့-Ing စစ်တိုက်ရာတွင်သေဆုံးခဲ့ရသည်။ အင်္ဂလိပ်, korolm ဖြစ်လာခြင်း, politi စုရုံး။ ပါဝါ, လယ်သမားအင်္ဂလိပ်၏ကျွန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဗလာဒီမာ၏နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်းငါတော်တော်များများဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ တောင်သူလယ်သမားအုံကြွမှု, ရက်စက်စွာနှိမ်နင်း to- ။
ဝီလျံဟာအောင်နိုင်သူ, နော်မန်၏ဝီလျံဝီလျံဟာ Bastard
ခမညျးတျော: ရောဘတ်ငါနော်မန်၏ Duke
ဇနီး: ဖလန်းဒါးစ်၏ Matilda
သားရောဘတ်ဝီလျံ, ရစ်ချက်, ဟင်နရီ
သမီး Adeliza, Cecilia, Adela, Agatha, Constance, Matilda
ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရဝီလျံရဲ့မိခင်မာရျနတျ၏ indomitable ဇာတ်ကောင်များအတွက်ချစ်စနိုး Garleva အမည်ရှိရိုးရှင်းသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုသူနော်မန်ရောဘတ်၏ Duke ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။
Wilhelm သည်သူ၏ဆက်ခံသူအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းယေရုရှလင်မြို့သို့ဘုရားဖူး, သွား, အကြောင်း, တရားမဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမယ့်သူ့ဖခင်ကသူ့ကိုချစ်သောကြောင့်ခံခဲ့ရသည်။ ရောဘတ်သေဘုရားဖူးများနှင့်နော်မန်၏ Baron စဉ်အတွင်း, သူ့ bastard Duke ရှိသည်ဖို့လို, မပုန်ကန်လေပြီ။ သောကြောင့်သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဝီလျံရန်လိုမုန်းတီးမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. , ငြိမ်းချမ်းရေး Duchy ၌တည်နေသည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းခဲ့နိုင်ဘူး။ ဤသည် Wilhelm ထောက်ခံသူများအနိုင်ရနှင့်လုလင် Duke နိုက်အခါ 1042 အတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအမိနျ့အားလုံးသူပုန်များ Wilhelm မှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသနားပေမယ်နော်မန်အတွက်ကမ္ဘာကြီးမကြာမီမည်သည့်အချိန်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ Wilhelm ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်း Burgundy ၏ Guido ၏ 1044 ခုနှစ်, သင်း ဖွဲ့. နဲ့ William Wilhelm ပြင်းထန်စွာရဲတိုက်, သံသယအဖြစ်သူ့ကိုလုပ်ကြံသူကိုပင်သူတို့အားသည်ကျွန်ဖျက်ဆီးသည်အကြမ်းဖက်သူများစစ်ကြောဤအချိန်တွင်ပြင်သစ်ဘုရင်ဟင်နရီဗြဲထံမှအကူအညီကိုရှာရတယ်။
အဆိုပါ 1056 ခုနှစ်, Wilhelm Matilda, ဖလန်းဒါးစ် Baudouin V. များ၏အရေအတွက်၏သမီးနှင့်လက်ထပ်